မြန်မာနိုင်ငံ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့သင့်ပြီလား သံတွဲမီးဘေးအတွေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာနိုင်ငံ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့သင့်ပြီလား သံတွဲမီးဘေးအတွေး
မြန်မာနိုင်ငံ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့သင့်ပြီလား သံတွဲမီးဘေးအတွေး
Posted by ဖိုးကြက်တောင်@badminton on Feb 13, 2012 in Copy/Paste |5comments
ငယ်စဉ်က ကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့ရာနေရာနှစ်ခုရဲ့စက်စပ်မှုတွေက ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့အဖြစ်အပြက်ကြီးတွေကို ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်၊ဒီနေရာနှစ်ခုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က မီးလောင်သွားတဲ့သံတွဲဈေးကြီးနဲ့ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုမကာကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝန်းပါ၊ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဟာဒီနေရာနှစ်ခုမှာကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်၊
သံတွဲဈေးအကြောင်းကိုအရင်ပြောပါမယ် ကျွန်တော်မိခင်ဘက်မှအဖိုးအဖွားတွေဟာ သံတွဲဈေးမှာ ကျွန်တော်မိခင်၏အကိုဦးထွန်းမောင်နဲ့အတူ ကုန်စုံဆိုင်ရောင်းပါတယ် ကျွန်တော်သူငယ်တန်းအောင်လို့မြို့မအလကလို့ခေါ်တဲ့ ဈေးအနီးကအလယ်တန်းကျောင်းကိုပြောင်းတဲ့အခါ ကျောင်းမုန့်ဘိုးကို ဒိဆိုင်မှာဘဲဝင်ယူရပါတယ်၊သူငယ်တန်းဘ၀ကစလို့ကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်းဟာ ကျွန်တော်ဈေးထဲမှာဘဲတနေကုန်ပါတယ် မုန့်မျိုးစုံစားရသလို ကစားစရာအရုပ်လေးတွေလဲ ကျွန်တော်လိုသမျှဝယ်ပေးတာကိုး ဈေးသူဈေးသားတွေက ကျွန်တော့်အဖိုးအဖွားတွေကို လေးစားသလိုကျွန်တော်ကိုလဲအရမ်းချစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဈေးမှာနေရတ်ာအလွန်ပျော်ပါတယ်၊၁၉၈၇ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်အဖွားဆုံးသွားတော့ ဒီဆိုင်နှစ်ဆိုင် နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဦးကြိးကရောင်းလိုက်ပါတယ်ဈေးနဲ့ဝေးသွားတာပေါ့၊ဒါပေမယ့် ဒိဈေးတည်ဆောက်ပုံကိုကျွန်တော်အခုထိမြင်ယောင်နေသေးတာက မီးဘေးအန္တရယ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ထားတဲ့စနစ်ပါ ဈေးအတွင်းထဲမှာနွေရာသီတောင်ရေမခမ်းတဲ့ရေတွင်းတွေရှိကြပါတယ် အခုလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ဈေးကတော့ အရင်ဈေးကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဈေးသစ်ပါ ဒီဈေးတည်ဆောက်မှုမှာ ကိုယ်ကျိုးတွက်တာတွေများတော့ အဆောက်အဦးတစ်ခုမှာ ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကို မေ့သွားတယ်ထင်တယ်ဗျာ မီးလောင်တဲ့အခါအသုံးပြုမယ့်ရေသိုလောင်ထားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး၊၊
သံတွဲမြို့ဟာ ရေအလွန်ရှားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် မဆလခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်အားပေးခဲ့ရတဲ့ မဟာဗောဓိဆည်ရှိပါတယ် ဒီဆည်ရေဟာမြို့သူမြို့သားတွေကိုယ်တိုင် လုပ်အားပေးတည်ဆောက်ခဲ့ပေမယ့်ဒီရေကိုမြို့သူမြို့သားတွေ ပြည့်ပြည့်၀၀မသုံးရပါဘူး ဒေသအာဏာပိုင်တွေအဓိကသုံးရမယ်လို့ပြောပါတယ် နောက်သူတို့နဲ့အလျှင်းသင့်တဲ့ သူကြွယ်တွေဦးစားပေးပေါ့ ပြီးတော့ရေထိန်းတဲ့စနစ်တွေလဲကြည့်ပါဦးအမှန်ရေလိုအပ်တဲ့ရပ်ကွက်တွေတော့ရေမရဘူး မလိုတဲ့နေရာတွေမှာရေပိုက်တွေကရေတွေထွက်နေလိုက်တာ နွေမှာတောင် မိုးရာသီလိုချောင်းတွေမြောင်းတွေရေလျှံလို့ ရေခွန်ကြတော့အချိန်တန်ကောက်တာပေါ့ ချဉ်ပင်အောက်ချဉ်ရှားဆိုတဲ့စကားကြားဘူးကြမှာပေါ့ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ကဒီလိုမျိုး နွေရာသီရေမရဘူး ဒီရပ်ကွက်ကိုလာတဲ့ရေပိုက်ကို ဘိုကုန်းတောင်လို့ခေါ်တဲ့ အရာရှိကုန်းမြင့်ကိုဦးစားပေးတင်ရလို့တဲ့ ကျွန်တော်တို့လမ်းထဲ အိမ်ခြေနှစ်ရာလောက်က နွေအခါရေခန်းတဲ့ရေတွင်းလေးတတွင်းကိုအမှီပြုနေရတာ ဒီရေတွင်းလဲတပါတ်မှာတရက်လောက်ရေပိုက်ကရေတည့်ပေတာပေါ့နှစ်နာရီလောက်ကြာမယ်ထင်ပါတယ်၊
နောက် မီးသတ်အကြောင်းပြောဦးမယ် ဒီနေရာက ကျွန်တော့်ငယ်ဘ၀အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုပါ ကျောင်းကပြန်ဆင်းလာရင် မီးသတ်ဝန်းထဲကပိတောက်ပင်ကြီးအောက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ ဂစ်တာတီးရင်းသီချင်းဆိုကြ ကောင်မလေးလှလှလေးတွေဆိုရင် ရည်းစားစကားလိုက်ပြောကြ ညဆိုလဲဂစ်တာတွေစုတီးကြ လူငယ်ဘာဝပျော်ခဲ့ရတဲ့နေရာလေးပါ နောက်မီးသတ်ကားထွက်တိုင်း ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပါတယ် မီးလောင်ရင်လဲကျွန်တော်တို့ပါတယ် သံတွဲရေရှားလို့မီးသတ်ကားရေဖြည့်ဘို့ ခုနှစ်မိုင်ဝေးတဲ့ ငှက်ပျောချောင်းဆည်မှာသွားဖြည့် ရေကဒီလောက်ရှားပါတယ်၊မီးသတ်ဝန်းထဲရေတွင်းရှိပေမယ့်နွေအခါရေမရှိပါဘူး မီးသတ်ကားတွေဆိုတာကလဲ တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး အားလုံးဂီလာနတွေပါ ဒါနဲ့မီးသတ်တပ်စုမှုးဦးကျော်သန်း(ကွယ်လွန်)လက်ထက်1983 လောက်မှာကျွန်တော်အရန်မီးသတ်သင်တန်းတက်ရပါတယ် သင်တန်းတွင်းသင်တန်းသားတွေအရည်အချင်းပြည့်မှီချင်းမရှိလို့ဆိုပြီး လက်တွေ့အတွေ့အကြုံများတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဝင်းဒွန်းကို သင်တန်ဆင်းဘို့ဆယ်ရက်အလိုမှာတက်ခိုင်းလို့ဝင်တက်ရပါတယ် လက်တွေ့ရော နှုတ်ဖြေမှာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အမှတ်အများဆုံးရခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအလွန်နှစ်သက်ပါတယ် မီးဘေးရှောင်ဟေ့မလောင်ခင်တားကြပါ သီချင်းလေးကို ချင်းအမျိုးသားကြီး ဒုတပ်ကြပ်ဦးထွန်းစိန်က သီချင်းဆိုလိုက် နှဲမှုတ်လိုက်ဆိုပြခဲ့တာတွေဟာလဲ ကျွန်တော့်ဘ၀အမှတ်တရာလေးတွေပါ အခု ကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့ရာသံတွဲဈေးမီးလောင်ပြာကြခဲ့ ခြင်းနဲ့အတူ ကျွန်တော်အလွန်ချစ်ခဲ့တဲ့မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဟာလဲအမည်ပျက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်၊
ဒါဟာဘယ်သူတွေကြောင့်ပါလဲ ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမီးသတ်ရဲဘော်တွေကို မြို့သူမြို့သားတွေကချစ်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၀ါးရင်းတုတ်ကိုင်ပြီးရမ်းကားလို့မရသလို လူရိုက်လို့မရပါဘူး မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ဖမ်းတာမှာလဲမပါပါဘူး ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုရိုက်နှက်တာမှာလဲမပါပါဘူး လမ်းပေါ်မှာလဲရမ်းကားတာမျိုးမရှိကြပါဘူး မီးလောင်ပြာကြပြီးမှ လူတွေကိုမှုလုပ်ဘို့ရောက်လာတဲ့မီးသတ်တပ်ဖွဲ့လို့လဲလူတွေပြောဆိုမခံရပါဘူး ပြည်သူ့အသက်စည်းစိမ်ကိုအသက်နဲ့ရင်းကာကွယ်ခဲ့မီးသတ်ပါ ခုတော့မီးသတ်ဆိုတဲ့ အမည်ကိုကျွန်တော်ခါးသီးလာတယ် ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ အစား မြန်မာနိုင်ငံ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးအမည်ပြောင်းရင်တော့ ဒီပညတ်ဟာ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ပိုပြီးအန္တရယ်ကင်းမလားလို့ထင်မိပီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့အတွက်လဲသိက္ခရှိလာမယ်လို့ထင်တယ် ဒါပေမယ့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဟာ ၀ါးရင်တုတ်ကိုင်ရမ်းကားတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေပယ်ရမယ် နောင် မီးငြိမ်းသတ်တဲ့ယန္တယားတွေရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုကိုမျက်ချေမပြတ်ရဘူး ရေအရင်းအမြစ်တွေဖန်တီးနိုင်ရမယ် ပြည်သူတွေကို မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုအသိတွေနိုးကြားအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်၊ သတိ သစ္စာသတ္တိ တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရင်း ပြည်သူတွေရဲ့စုပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကိုရရှိအောင် ကြိုးစားဆိုရင်ဖြင့်
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ရဲ့ အဓိက တာဝန်ကိုက
မီးဘေး ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လို့ ကျွန်တော်ကတော့ သိထားပါတယ်ဗျာ။
သီးခြားကြီး ထပ်ဖွဲ့ဖို့ မလိုဘူးလို့ ယူဆပါကြောင်း။
နောက်တခုကတော့.. အဆောက်အဦးဆောက်ရင်.. မီးကာကွယ်ရေးစံနစ်တွေ..ကြိုတပ်ထားရတာပါပဲ..။
ဈေးဆိုင်တန်းလိုစုပြွတ်နေတဲ့နေရာမျိုးဆို…မီးသတ် ရေပိုက်ခေါင်းတွေကို.. ဈေးအထဲမှာ.. အကွက်ချပြီး…. တပ်ထားသင့်တာပေါ့..။
အဲဒါမျိုးဆို.. လောင်လည်း. လွန်ရော.. ၁၀ခန်းပဲ..။
ယူအက်စ်က ရှော့ပင်းမောတွေမှာ.. မီးသတ်ကားရပ်ရမဲ့နေရာကို အမြဲတန်း ကားမရပ်ရဆိုင်းဘုန်နဲ့.. နေရာလွှတ်ထားပြီး. အဲဒီမှာ ရေပိုက်ခေါင်းကြီးတွေကို ထားတယ်..။
ဈေးဆိုင်ခန်းတခုတိုင်းဆီမှာလည်း.. မီးခိုးထွက်တာနဲ့.. အလန်မ်းမြည်တာ.. ရေတွေအလိုလိုဖြန်းချတာတွေထားတယ်..
အဲဒီင်္လောက်ဆို.. အကုန်များမှာမို့.. မလိုဖူးထင်ပါတယ်..
ရေပိုက်တွေလောက်တော့.. ဈေးထဲ.. အဆင်သင့်(နေရာအနှံ့)တပ်ထားသင့်တယ်.. ထင်မိတယ်..။
မီးသတ်ပါ ။ခုတော့မီးသတ်ဆိုတဲ့ အမည်ကိုကျွန်တော်ခါးသီးလာတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်
တပ်ဖွဲ့ အစား မြန်မာနိုင်ငံ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးအမည်ပြောင်းရင်တော့ ဒီပညတ်
ဒါပေမယ့် ဗျာသူတို့ ခမျာ တတ်နိုင်သလောက်တော့လုပ်ကြပါတယ်။အထောက်အကူတွေက အားနည်း
လွန်းတာ၊ရှိတဲ့ ကားတွေက အိုမင်းလွန်းနေတာ ပြသနာလို့ ဘဲမြင်မိပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို ကျနော်ရေး
မယ်လုပ်နေတုန်းမှာ ကိုထွန်းရေးပေးသွားတော့ ပိုပြည့်စုံ လှပသွားတာပေါ့။
အာ ဒီလိုလဲ ဟုတ်လောက်ဘူးနဲ့တူတယ် ၊ မီးသပ်အဖွဲ့ကိုသာ အားကိုးအားထားပြုခဲ့ရင်ဖြင့်
သံတွဲမြို့ကြီး ခုလောက်ဆို ပြာပုံ အတိ ဖြစ်နေမှာ သေချာသလောက်ပါ ၊
လေဆိပ် တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်နေတဲ့ ကားများနဲ့ ကမ်းခြေ ဟိုတယ် များမှ ရေကားများသာ
ဈေးတခုလုံးနီးပါး ပြာကျသွားအောင် မီးလောင်ခဲ့တဲ့အချိန်က ၂ နာ၇ီ သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်၊
မီးသတ်ကား က မီးလောင်ပြီး ၁ နာရီခန့်ကြာပြီးမှ ရောက်လာတာ ၊
မီးသတ်သမားတွေက ညက သောက်ထားတဲ့ အရက် အရှိန် မပျယ်သေးဘူးတဲ့ဗျာ ။
htun ht oo@badminton says:
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီလိုပါ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကသူလုပ်ရမယ့်သူ့တာဝန်တွေကို မလုပ်ရဘဲ ၀ါးရင်တုတ်တကားကားနဲ့ မဆိုင်တာတွေလျှောက်လုပ်နေတာ အထက်အမိန့်ကြောင့်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ် ဒါကြောင့်ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးတာပါ ပြည်သူချစ်အောင်နေရမယ့်မီးသတ်ကိုပြည်သူမုန်းအောင်လုပ်ခိုင်းတာ ဘယ်သူတွေလဲ ၊
ကောင်းပြီ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုတာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တခုတည်းမှာဘဲ တာဝန်ရှိလား ပြည်သူမှာလဲတာဝန်ရှိတယ် တာဝန်အရှိဆုံးကတော့ အစိုးရတာဝန်ပေါ့ ဒါသူတို့မှာအပြည့်အ၀တာဝန်ရှိတယ်၊
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဆိုတာက ပြည်သူကိုမီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိတွေရှိအောင်လုပ်ရမှာ မီးဘေးတစ်ခုဖြစ်လာရင် ပြည်သူမပါဝင်ဘဲနဲ့တော့ ဒီဘေးကိုမကျော်နိူင်ဘူး နောက်မီးသတ်ကားတွေ ကျွန်တော် 1988 ခုနှစ်ထိမီးသတ်ဝန်းထဲရှိတုန်း ကြုံခဲ့ရတာ ကားတွေက ဂျပန်ကပေးထားတဲ့ toyota ကားကောင်းတွေ ဗိုလ်တယောက်လာရင် တခါဖျက်တယ် ကားကောင်းမကျန်တော့ဘူး မြီု့သူမြို့သားကအမြင်ဆိုးတာရုပ်အပျက်ဆုံးဘဲ မီးသတ်လာရင်ငွေတောင်းဘို့လာတယ်ဘဲထင်နေတာ ဒီတော့ဒီလိုရလာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲ အစိုးရပေးတဲ့ယန္တယားပြင်ဆင်စရိတ်တွေဘယ်ရောက်သွားလဲ မီးသတ်ဝန်းထဲမှာ ၀န်ထမ်းသက်သာဆိုင်ခန်းတွေရှိခဲ့တယ် ဒီငွေတွေဘယ်မှာသုံးခဲ့သလဲ နောက်ကတော့အစိုးရ မြန်မာပြည်မှာမီးဘေးကပ်တွေ ဒီလောက်ဖြစ်နေတာ ဒါကိုအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတွေလုပ်သင့်တယ် တခါက အဆိုတော်မင်းမင်းလတ်ဆိုတဲ့သီချင်းလို “ငှက်ပျောသီးစားတဲ့မိတ်ဆွေများ ပေတရာပေါ်မှာ မပစ်နဲ့ငှက်ပျောခွံများ ကစ်ဆင်းဂျားနဲ့ဟာရိုးရောဘင်တို့ ဆူဟာတိုနဲ့ အင်ဒီယာဂန္ဒီတို့ နင်းမိသွားလို့ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး” အဲလိုဘဲ ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေ နဲ့ မှုးကြိးသန်းရွှေတို့အိမ်မီးလောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆင်ပိန်တော့ဆိတ်လောက်တော့ကျန်ပါသေးတယ်လို့ တနေ့လုပ်တနေ့စား ဆင်းရဲသားကျောမွဲတွေဆိုရင်တော့ စဉ်းစားပေါ့ဗျ မြန်မာပြည်မှာ မီးဘေးတွေကလဲရှိတ်စပီးယားပြဇာတ် ဇာတ်တိုက်ထားသလို တခုပြီးတခုဆိုတော့လဲ အလှူရှင်တွေလက်ပန်းနေပြီ ပေါ့ဗျာ